ဖာဂူဆန် နဲ့ ဆိုးရှားလ်ကြားကမန်ယူWeapon Player နေရာလုပွဲ – FBV SPORT NEWS
ဖာဂူဆန် နဲ့ ဆိုးရှားလ်ကြားက မန်ယူ Weapon Player နေရာလုပွဲ
မန်ချက်စတာ ယူနိက်တက် ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် နိုင်ပွဲအပြီး အိုးထရက်ဖို့စ်ကွင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ Wepaon player ကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးသမားများစွာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်လာကြပါတယ်….
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ ဆိုးရှားလ် ရဲ့ ကစားကွက်ဖြစ်တဲ့ စိန်ပွင့် Game Plan ကနေ အက်စတန်ဘူးအသင်းနဲ့ပွဲမှာ လုံးဝခြားနားသွားပြီး ဖာဂူဆန်လက်ထက်က ကစားကွက်မျိုးကိုမြင်လိုက်ရလို့ ကစားသမားဟောင်းတွေကတောင် မန်ယူ ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ခရီး ကို ထင်ကြေးများစွာပေးနေခဲ့ကြပါပြီ….
Sport Trible News ကတော့ ယခုလက်ရှိ ကစားသမားနှစ်ဦးကြား Weapon Player လုပွဲ ဟာ ဖြစ်လာတော့မှာလားလို့ သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်…..
MEN News ကတော့ အဲလက်တဲစ် ကို မန်ယူရဲ့ Weapon Player လို့သုံးသပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်…နောက်တယောက်ရောဘယ်သူလဲဆိုတော့ လုရှောပါ…ယခုလက်ရှိမှာတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရပါတယ်…ပြန်ကောင်းလာတာနဲ့ Weapon Player နေရာလုပွဲကို ဒီကစားသမားနှစ်ယောက် လုရမယ်ဆိုတာကို Sport Tible News က သုံးသပ်ထားပါတယ်….
အဲလက်တဲစ် ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါနိုင်တယ်…..ဘောလုံးကို ထိမ်းကစားနိုင်ပြီး အပြေးအားထက် စကေးပိုင်းကို ထူးချွန်ပြီး ရီးရဲက မာဆယ်လိုတို့လိုမျိုး တောင်ပံက ကစားနေရာကနေ ဗဟို တိုက်စစ်မှူးနေရာမှာ ဘွားခနဲပေါ်လာပြီး ဂိုးသွင်းသွားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မျိုး အဲလက်တဲစ်မှာ ရှိနေပါတယ်…
နောက်ပြီး တောင်ပံတိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ နှစ်များစွာအသားကျလာခဲ့တဲ့ မန်ယူ Game Plan အရ ဆိုရင်လည်း အဲ့လက်စ်တဲစ်ဟာ တိကျသေချာတဲ့ အမြင့်ဘောများစွာကို တိုက်စစ်မှူးကြီး ကာဗာနီဆီကို အရောက်ပို့ပေးနိုင်သူပါ……ကွင်းလယ်က ထားပြီးကစားမယ်ဆိုလည်း ကစားနိုင်သေးတဲ့ အဲ့လက်တဲကတော့ မန်ယူ အတွက်ပြည့်စုံလွန်းနေတဲ့ ကစားသမားပါ….
လုရှော ကိုကြည့်ရရင် လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းများစွာက အီဗရာလက်သစ်ဆိုပြီး မန်ယူကစားသမားဟောင်းများက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတယ်..လှရှောကတော့ တောင်ပံတိုက်စစ်ကို ပြေးအားကောင်းကောင်းနဲ့ အီဗရာ လို လိုက်နိုင်တဲ့ကစားသမားပါ…..နောက်တခုက တောင်ပံကနေ ရတ်ဖို့နဲ့ဘဲဆိုဆို မာရှယ်နဲ့ ဘဲဆိုဆို တွဲလုံးတွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်နောက်တန်းကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို ဖန်တီးနိုင်သူပါ…
သူကအဲ့လက်တဲလို စကေးပိုင်းမှာတော့အားနည်းနေပါသေးတယ်….အမြင့်ဘောတွေမှာတော့ တဲလက်စ်လောက်မတိကျသေးပေမဲ့ တဲလက်စ်နာနေချိန်တော့ သူ့ အမြင့်ဘောတွေက အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ပြိုင်ဘက်နောက်တန်းကို အလုပ်များနေစေခဲ့ပါတယ်…
လက်ရှိဖာဂူဆန် ရဲ့ Game Plan ကိုသုံးနေတဲ့ ဆိုးရှားလ်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ရချက်နေတဲ့ အနေထားတခုကို ပိုင်ဆိုင်ရအုံးမှာလို့ Sport Tribble News ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်….